Doodii xisbiyada qaranka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Reinfeldt lovar sänkt skatt till pensionärer
Doodii xisbiyada qaranka
Publicerat måndag 25 januari 2010 kl 13.52
Labdad hogaamiye ee labada xisbig ee kala ah xisbiga garbka midig ee Moderaterna iyo xisbiga garabka bidix ee Socialdemokratiga. Foto: Maja
Habeenimadii axada ee bisha janwari ay aheed labaatan iyo afar sanadka 2010-ka waxaa Tiifiiga qaranka ee Iswiidhan barnaamijka Agenda markii ugu horeeysey sanadkaan , ay isku soo hor istaagey labdad hogaamiye ee labada xisbig ee kala ah xisbiga garbka midig ee Moderaterna iyo xisbiga garabka bidix ee Socialdemokratiga.
Hogaamiyaha xisbiga garabka midig Fredrik Reinfeldt (M) ayaa sheegay in uu ka dhimi doono canshuurta dadka waayeelkaa, uuna horey uga dhimey.Mona Sahlin, hogaamiyaha xisbiga garabka bidix ee Socialdemokratiga ayaa dhaleeceysay siyaasada xisbiga Fredrik Reinfeldt iyo xulufadiisa oo ah kuwa iyagu kuwa haya taladda wadanka, waxa ayana sheegtay haddii ay ku guuleeystaan xisbiyada mucaaradku doorashadan dhici doonta bisha Septeembar ee sanadkan ineey wayaabo badan waxka badali doonto.
Doodaan uu qabtey Tiifiiga qaranka ee Iswiidhan barnaamijkiisa Agenda ayaa labada hogaamiye ku falan qeeyeen qodobada yakamidka yahiin. Guud ahaan hawlaha la xiriira dhaqaalaha, canshuuraha qidmada laga qaado dadyoowga gaboobay, kuwa xannuunsan iyo caymiska bulshada. Dhamaan qodobadas ayeeysan isku waafaq saneen labadan hogaamiye. Dhinaca kale tiro koobkii ugu danbeeyay ee labada garab ee siyaasadeed ee dalkaan ayaa lagu shaaciyey in xisbiyada garbka bidixi hogaamina hayaan ayna heeystaan 51,8 boqolkiiba meesha xisbiyadda garabka midigi ay heestaan 41,5 boqlkiiba waa xisbiyada talada dala hayee.